Ny tsindry ao Sri Lanka ~ Journey-Assist - Ny tena mamy indrindra. Tsindrin-tsakafo malaza.
Pejy fandraisana » Masakan'i Sri Lanka » Sri Lanka » Asia » Eran-tany / Faritra » Dessert any Sri Lanka
Mamy sy tsindry any Sri Lanka
Ny fototry ny tsindrin-tsakafo nentin-drazana Sri Lanka dia mety ho vary, kobam-bary, flakes voanio miaraka amin'ny fanampian'ny ronono, voanjo ary tantely palmie. Betsaka ny tsindrin-tsakafo betsaka any Sri Lanka. Ity ny lasantsy vary miaraka amin'ny voaniho, sy zava-mamy voanio, mamozy, salady voankazo misy gilasy, ary biscuits isan-karazany izay mazàna amin'ny fankalazana ny daty lehibe sy manan-danja.
Manolotra anao izahay ny tsindrin-tsakafo sy zava-mamy indrindra any Sri Lanka:
Vinaingitra mifototra amin'ny ronono sy atody, miaraka amin'ny fametrahana ny kardamom, agar-agar, vanila ary rano kely izahay. Manompoa chilled amin'ny fandatsahana tantely palmie (amin'ny fiteny eo an-toerana "jaggeri").
Vokatra vita amin'ny ronono vita amin'ny ronono. Lakroa eo anelanelan'ny yazy sy laoka izany. Vary efa vita any Sri Lanka dia amidy any amin'ny fivarotana lehibe. Amin'ny kafe dia arotsaka amin'ny vilany tanimanga. Ity dia sakafo malaza amin'ny sakafo maraina. Tian'i Sri Lankans afangaro aminy ny tantely palmie mitovy aminy.
Tsindrin-tsakafo malaza indrindra. Masaka ao anaty voan-dronono, matetika miaraka amin'ny additives toy ny voanjo sy sesame. Notapahina sy arahina miaraka amin'ny fanamboarana diamondra. Izany hoe, i Kiribat dia porridge masaka mangatsiaka nitazona.
Dessert dia mety tsy mamy foana. Miankina amin'ny sakafo mpanampy ao anatiny, toy ny sambol na ny lovia fandroana nentim-paharazana.
Kiribath miaraka amin'ny mpihaza Sambol Kiribath miaraka amin'i Sambol)
Ny koba tsara toto voahosotra vita amin'ny lafarinina vary sy tantely palmie. Karazana kavum manodidina ny 20 eo ho eo no fantatra. Iray amin'ireo sakafo lehibe izy io amin'ny fankalazana ny taom-baovao Lankanes.
Cookwood "borosy" - koba amin'ny koba vary sy ny voaniho, afangaro amin'ny menaka voanio. Makà lasitra metaly manokana amin'ny fametahana lava, ny fototra izay atsoboka ao anaty vongan-drano, ary avy eo atsoboka ao anaty menaka.
Ireo dia vatomamy, ny fototry ny sisan-tany sy voaniho miaraka amin'ny fanampian'ny tantely palmie. Voankazo tena voajanahary matsiro tokoa. Azonao atao ny mividy any amin'ny toeram-pivarotana na fivarotana eny an-toerana. Amidy amina fonosana orinasa.
Mamy ronono, vita amin'ny ronono, siramamy, dibera, alika ary vanila. Indraindray miaraka amin'ny ambo-tsimby. Amidy any amin'ny ankamaroan'ny fivarotana ao an-toerana.
Voam-boaniho. Amidy amina toeram-pivarotana lehibe iray any Sri Lanka, ary koa isaky ny fivarotana kely any an-toerana. Vonona amin'ny sango voasarimakirana sy siramamy siramamy, indraindray miaraka amin'ny loko fanosorana ny loko maitso sy mavokely.
Mofomamy misy diamondra. Vita avy amin'ny lafarinina lozito miaraka amin'ny fanampian'ny tantely palmie na molases, voan-kavana casamom sy cardamom. Alyuva dia matsiro nentim-paharazana ho an'ny fialantsasatra lehibe sy amin'ny taom-baovao.
Mofomamy semolina crispy vita amin'ny semolina, voanio, siramamy palmie, voan-tsaramaso ary voamaina. Voatahiry tsara ny mofomamy. Matetika izy io dia toy ny zava-mamy mahazatra ho an'ny Taom-baovao Lankanes.
Ny mamy vita amin'ny sôkômbra, lafarinina ary vary tantely volontsôkôlà mainty (kithul jaggery). Ity tsindrin-tsakafo ity dia matetika vonona amin'ny fankalazana ny taom-baovao Lankanes. Kalu Dodol, natao tao Kataragam, dia ankasitrahan'ireo olona any an-toerana. Inoana fa teo no nanamboarana ny tsindrin-tsakafo arakaraka ny fomba fanao mahazatra.
Ny Pie amin'ny lanonana fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fankalazana fianakaviana, fampakaram-bady. Izy io dia vita amin'ny manitra, voanjo ary voankazo. Misy tsirony malefaka sy tsy mahaliana tsirony. Ny mofomamy vita amin'ny homemade Day dia voajanahary kokoa noho ny fivarotana.
Ny pancakes voanio vita amin'ny lafarinina varimbazaha, atody ary ronono miaraka amin'ny fanampian'ny turmeric (ho an'ny loko mavo mahafinaritra). Ny fihary dia noforonina anaty horonana, ao anatiny no nanaovana ny famenoana avy amin'ny felana voaniho miaraka amin'ny vanila sy havozo, feno be tantely. Afaka mahatsapa ny pancakes voanio na ao amin'ny trano fisakafoanana na any an-dalambe.
mmmm ... matsiro daholo ny zava-drehetra. Te hanandrana ny zava-drehetra fotsiny aho)
Marina, indrisy, tsy ny kafe rehetra dia afaka manolotra karazana tsindrin-tsakafo feno.
ary mampalahelo izany .. ny tsakafo nasionaly.
Eo koa ny lisitrareo tsy ampy salady voankazo sy gilasy. Mety ho malaza eo amin'ireo mpizahatany ihany, fa na izany aza.
Eny. Misaotra ny fanehoan-kevitra. Tsy vita ity pejy ity ary azontsika antoka fa hanampy azy ireo ny fampahalalana momba ny tsindrin-tsakafo malaza toy ny gilasy sy salady misy voankazo.
Ny tsindrin-tsakafo Sri Lanka dia lohahevitra manerantany izay mendrika alain-tahaka!
Izy ireo dia tena samihafa ary tsy mitovy amin'ny mofomamy sy pasta mahazatra amin'ny Eoropeana na Slavs.
Tsara homarihina fa ao anatin'ireo tsindrin-tsakafo marobe, dia toy ny fototra iray, ny vary sy ny voan-dronono mitovy dia ampiasaina amin'ny fanomanana lovia lehibe. Tsara homarihina fa ny tsindrin-tsakafo eto dia tsy voatery zava-mamy, fa matetika misy zava-mamy na mangidy aza.